शिवशक्तिको महिमा र सन्देश - Khabar Break
हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा उपस्थित भक्तहरूको भीडले शिवरात्रिको महत्व तथा भगवान् शिवप्रतिको आस्थाको उजागर गर्छ। यसबाहेक घरघरमा रहेर शिवको उपासना गर्नेहरू पनि असंख्य हुन्छन्। हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा शिवभक्ति उत्तिकै देखिनुले हिन्दु सनातन परम्पराप्रति हाम्रो अचेतनमा रहेको आस्थाको विम्बन गर्छ। शिवभक्ति र शिवरात्रिको यसै सन्दर्भमा शिव–शक्तिको महिमाबारे सही व्याख्या गरिनु पनि आवश्यक देखिन्छ। किनभने अहिले शिवरात्रिलाई ‘नांगा बाबा’ हरूको दर्शन गर्दै ‘शिवबुटी’ का नाममा लागुपदार्थको निर्बाध प्रयोग गर्ने दिनका रूपमा लिनेहरूको पनि कमी छैन।
धर्मको मर्म नबुझेर बिहान भगवान्लाई पूmल चढाउँदा र साँझ दियो जलाउँदासम्म अर्काको कुभलो चिताउन नछाड्नेहरू पनि यहीं छन्। आफ्नो भलाइका लागि मात्र नभएर अर्काको अनष्टिको कामना गर्दै भगवान्लाई भाकल गर्नेहरूको कमीसमेत हाम्रो समाजमा छैन। मन्दिरमा घुइँचोको फाइदा उठाएर जुत्ता–चप्पलदेखि गर–गहना चोर्नेहरू त छँदैछन्; शिवरात्रिमा पशुपतिनाथपरिसरमा पूmलले सजाइएको बसाहा लुछेर पूmल लैजाने भक्तहरू पनि शिवजीले नदेखेका कहाँ हुन् र ?
वर्तमानमा राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दाका रूपमा जुन समतामूलक समाजको परिकल्पना गरिएको छ; त्यसलाई हाम्रो सनातन परम्परामा शिव–शक्तिको सम्बन्धका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि जाति र वर्गको अन्त्य हुनुपर्ने मान्यता शिवले सतीसँग विवाह गरेर स्थापित गरेका हुन्। दक्ष प्रजापतिजस्ता राजाकी छोरी सतीदेवीसँग विवाह गर्न शिव सन्न्यासी रूपमा जानुको आशय यही थियो। सोही आशयअनुरूप देवी सतीले पनि शिवलाई सहर्ष स्वीकार गरिन्। समाजमा सम्भ्रान्त वर्गले विपन्न वर्गप्रति राख्ने नकारात्मक धारणा र उनीहरूलाई दिइने प्रताडनाका कारण यस्ता वर्गको जीवन दुर्घटित हुने यथार्थलाई सतीदेवीमाथि उनका माइतीद्वारा गरिएको अपमान तथा त्यसलाई सहन गर्न नसकी उनले गरेको आत्मदाहको घटनाले प्रतिविम्बित गरेको छ। शिव र सतीको कथा दाम्पत्य प्रेमको अमर गाथा हो। किनकि संसारमा शिवजस्तो पत्नीलाई प्रेम गर्ने पति अर्को देखिँदैन। शिवले विक्षिप्त भई पत्नीको शव बोकेर संसारको भ्रमण गर्नु, सतीले पार्वतीका रूपमा पुनर्जन्म लिएर हरप्रयास गरी पुनः शिवलाई नै पति वरण गर्नु दाम्पत्य प्रेमको अद्वितीय कथा हो।
मानिसले जति नै भोगविलास गरे पनि, कुकृत्य र अपराध गरी सम्पत्ति कमाए पनि उसको भोग सकिएपछि त्यो वैभवले उसलाई चिताको ज्वालाबाट जोगाउन सक्दैन भन्ने यथार्थबोध गराउन शिव चिताभस्म शरीरमा लेपन गर्छन्। भूत–प्रेत, डाकिनी–साकिनी आदि सबैले घृणा गर्ने पात्रलाई आफ्नोवरिपरि स्थान दिने उनले बाघको छालाको आसन गर्छन्। यसको आशय हो– जसले हिंस्रक शक्तिमाथि नियन्त्रण राख्न सक्छ उही सफल र महान् बन्छ। शिवले विष, भाङ, धतुरो आदि सेवन गर्दछन् भन्नुको अर्थ जीवन–जगत्मा राम्रा–नराम्रा सबै पक्ष हुन्छन् र ती सबैको आआफ्नै महत्व पनि हुन्छ। सही प्रयोगद्वारा विष पनि औषधि बन्न सक्छ। विषमतालाई आपूmभित्र त्यसरी नै दबाएर राख्नुपर्छ जसरी शिवले हलाहल पान गरी संसारलाई अनिष्टबाट जोगाएका थिए। सदा साधनारत शिवबाट सिक्नुपर्ने अर्को कुरा हो– हामीले हरक्षण आफ्ना विचार एवम् व्यवहारबारे आफैले मन्थन गर्नुपर्छ। आत्ममूल्यांकनले नै जीवनलाई सार्थक बनाउँछ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा डा. साधना प्रतीक्षाको विचार छ ।